Posted on September 4, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်… ခုတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်တော် ရေးလက်စ ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ဆောင်သင့်သောအချက်လေးများ ဆိုတဲ့ ထဲက အိုင်း (၅) ကိုဆက်လက်ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. လိုအပ်ချက်လေးများကို စုစည်းပြီး ကြိုးစား ရေးသားထားပါတယ်.. မပြည့်မစုံဘဲ လိုအပ်နေခဲ့ပါက… ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်ကာ လေ့လာပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ…နော်…
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Run ထဲကနေ “msconfig” လို့ရိုက်လိုက်ပီး System Configurationကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်…နော်…ကဲစပြီနော်..
Boot ထဲရောက်တာနဲ့ ပထမ ညာဘက်က နံပါတ် (၂) နေရာက Timeout နေရာမှာ3seconds ကိုဘဲထားပေးလိုက်ပါနော်…ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ၀င်းဒိုးတက်တက်ချင်း
ရွေးချယ်စရာ (Dual Boot တင်ထားတယ်ဆိုရင်ပေ့ါ) OS တွေရှိရင်တော့3စက္ကန့်ပဲသတ်မှတ်
ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ၀င်းဒိုးအတက်ကိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။နေဦး နောက် နံပါတ် (၃) Advanced options ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ပါ…
ကလစ်တာနဲ့ ညာဘက်က ဇယားလေး တခု ထပ်ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ကျလာတဲ့ထဲက.. NumberProcessors ဆိုတာမှာ အမှန်ခြစ်ပါ သူ့ထဲမှာ နံပါတ် ဘယ်တိုင်းတာ ထိပါလဲ နောက်က မျှားလေးကိုကလစ်ကြည့်ပါ ပါလာတဲ့ ထဲက အမြင့်ဆုံးနံပါတ် ထိ ထားပေးလိုက်ပါ..အနော့်စက်ကတော့
1-2 ဘဲပါတော့2ဆိုတာ ထားလိုက်ပါတယ်.. တချို့ဆို 1-2-3-4- ဆိုတဲ့ထိ ပါလိမ့်မယ်.. အမြင့်ဆုံးကိုသာရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါနော်..ပြီးတာနဲ့ ညာဘက်ကဇယားကို ok ပေးလိုက်ပါ..
Services ကိုရောက်တာနဲ့ အပေါ်ပုံပါ သူလည်း အပေါ်ဆုံးက Stratup တုန်းကလိုပေါ့… မိမိတို့ မလိုအပ်သော အရာများကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေး၇မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..ပြီးတာနဲ့ Apply/Ok ရပြ်ီနော် ထွက်လို့..ေိေိ
သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေ လုပ်ပေးခငြ်းဖြင့် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာလေးလည်း လန်းဆန်းပေါ့ပါးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည် မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်… အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေနော်….
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ..ဘလော့ခရီးသည်မှ နည်းပညာများအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်သောနေရာလေးများအား ဆက်လက် လည်ပါတ်လိုပါက
ဘလော့ခရီးသည်သို့ ဒီမှာ သွားလိုက်ပါ
← Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၄)
Locked File တွေ ကို Schedule လုပ်ပြီးဖျက်ပေးမယ့် Reboot Delete File Ex →